Dowladda oo sheegtay inay ka hortagtay qaraxyo ay Aasayeen Al-Shabaab | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Dowladda oo sheegtay inay ka hortagtay qaraxyo ay Aasayeen Al-Shabaab
Ciidanka Dowladda Soomaaliya ayaa howlgal qorsheysan ka fuliyay tuulooyin ku dhow degaanka Janaale ee Gobolka Shabellada Hoose,waxaana la sheegay in howlgalkaas ay kusoo qabteen Qaraxyo lagu diyaarinayay duleedka janaale.
Taliyaha Ciidanka Dhulka Janeral C/Xamiid Dirir oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in Howlgal ay Ciidamada Xoogga Dalka ka fuliyeen Janaale ay lagu soo qabtay Qaraxyo ay Al-Shabaab doonayeen inay ku Aasaan wadada u dhaxeysa Janaale iyo tuulada urunji ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Sidoo kale Taliyaha waxaa uu sheegay in howlgalkaas ay sidoo kale ku dileen 13 dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab,isla markaana ay sidoo kale bururiyeen Xarumo ay ku diyaarin jireen qaraxyada waa sida uu hadalka u dhigay.
Deegaano badan oo ka tirsan Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa mararka qaar qaraxyo iyo weeraro toos ah waxaa ay Al-Shabaab la beegsadaan Ciidamada Dowladda iyo kuwa AMISOM xilliyada qaar oo ay howlgallada ku jiraan.
Dowladda oo sheegtay inay ka hortagtay qaraxyo ay Aasayeen Al-Shabaab was last modified: June 8th, 2020 by Admin
Madaxweynaha Puntland iyo Agaasimaha Hay’adda Socdaalka oo muqdisho ku kulmay